အိပ်ရေးဝဝအိပ်ချင်သူတွေ သောက်သုံးပေးသင့်တဲ့ အဖျော်ယမကာ ၁၀ မျိုး - Hello Sayarwon
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » အိပ်စက်ခြင်း
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 31, 2020 .2mins read
လူတိုင်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းတော့ ဆန္ဒမပြည့်ဝကြပါဘူး။ တစ်ချို့က အိပ်ရေးဝဝအိပ်ချင်ပေမယ့် အိပ်မပျော်ကြတာမို့ အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ကုစာပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ သင့်လျော်တဲ့ အဖျော်ယမကာ တချို့ကို မှီဝဲ သောက်သုံးပေးတာပါပဲ။
တချို့သော သဘာဝအစားအစာတွေဟာ အိပ်ပျော်အောင် ကူညီပေးနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညပိုင်းတွေမှာ အစားအစာမှီဝဲတာက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တာမို့ ဖျော်ရည်တွေကို မှီဝဲပေးတာက ပိုကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ယာဝင်ခါနီး ၁နာရီနဲ့ ၁ နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ အောက်ပါ ဖျော်ရည်တွေကို မှီဝဲပေးမယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိပ်ပျော်စေဖို့ အကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ လေ့လာချက်တွေကဆိုထားပါတယ်။
နို့ – အိပ်စက်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး လက်နက်ပါပဲ။ နို့မှာပါဝင်တဲ့ Amino Acid က အိပ်ပျော်စေဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ယာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ နို့တစ်ခွက် သောက်ပေးသင့်တာပါ။ နို့က အားရှိစေရုံတင်မက အိပ်ပျော်စေဖို့လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
ဗာဒံစေ့နို့ – အိပ်ပျော်စေဖို့ အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ ဗာဒံစေ့နဲ့ နို့ကို တွဲဖက်ဖန်တီးထားတဲ့ Almond milk တွေဟာ အိပ်ပျော်စေဖို့ အကောင်ဆုံးကူညီပေးနိုင်တဲ့ ဖျော်ရည်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ Tryptophan ၊ Melatonin နဲ့ Magnesium တို့ ၃ မျိုးလုံးပါဝင်တာမို့ အစွမ်းအထက်ဆုံး နည်းလမ်းလို့တောင်ဆိုလို့ရပါတယ်။
Chamomile tea – ကာမိုမိုင်းလ်လက်ဖက်ခြောက်က နို့လိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေနိုင်တယ်လို့ လူသိများပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်တွေအရလည်း ဒီလက်ဖက်ခြောက်ဟာ အိပ်မပျော်ဝေဒနာကို ကုစားနိုင်သလို စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း ပေးပါတယ်တဲ့။ သူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Apigenin ဆိုတဲ့ဓာတ်က ဦးနှောက်ကို ကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Valerian tea – ဗလာရီယန်အမြစ်နဲ့ အပင်ကို အိပ်ဆေးတွေမှာ အသုံးချကြသလို ဗလာရီယန်အပွင့်ကို အခြောက်ခံကာ ရေနွေးထဲခတ်ပြီး မှီဝဲတာကလည်း အိပ်ပျော်စေဖို့ အကူအညီပေးပါတယ်။ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ အပွင့်ကိုအခြောက်ခံ၊ အမှုန့်လုပ်ပြီး ဆေးပြားအဖြစ်လည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်။
သံပုရာ ရေနွေးကြမ်း – ရေနွေးထဲကို သံပုရာရည်လေး ညှစ်ထည့်ပြီး သောက်တာကလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်တာမို့ အိပ်ယာမဝင်ခင်မှာ မှီဝဲပေးသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှီဝဲတာက အိပ်ပျော်စေရုံတင်မက အဆီလည်းကျစေတယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။
Lavender tea – လာဗန်ဒါလက်ဖက်ခြောက်ကလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ မှီဝဲသင့်တဲ့ အရည်တစ်မျိုးပါ။
Passionflower tea – ပက်ရှင်ဖလားဝါးလက်ဖက်ရည်ကလည်း သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ညဘက်မှာ အိပ်ပျော်စေဖို့နဲ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
တတိုင်းမွှေးပွင့် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း – တတိုင်းမွှေးပွင့်ကို အခြောက်ခံပြီး လက်ဖက်ခြောက်အဖြစ် ခပ်သောက်တာကလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလက်ဖက်ခြောက်ကို အမျိုးသမီးတွေ ရာသီသွေးဆုံးချိန်မှာလည်း မှီဝဲပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်မပါဝင်တဲ့ လက်ဖက်စိမ်း ရေနွေးကြမ်း – ကဖိန်းဓာတ်ဖယ်ရှားထားတဲ့ လက်ဖက်စိမ်း လက်ဖက်ခြောက်တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းတွေကလည်း ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ မှီဝဲပေးသင့်တဲ့ အရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် ကူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ချယ်ရီသီးဖျော်ရည် – ချယ်ရီးသီးစားတာ ချယ်ရီသီးဖျော်ရည်သောက်တာတွေကလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်စက်အနားယူနိုင်စေပါတယ်။ ချယ်ရီသီးဟာ အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက် သဘာဝအစားအစာတစ်မျိုးပါ။
အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ ရှောင်ကျဉ်ရမယ့် အဖျော်ယမကာများ
အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ မှီဝဲရမယ့် ဖျော်ရည်အမျိုးအစားတွေကို ဖော်ပြပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ရှောင်ကျဉ်ရမယ့် အဖျော်ယမကာတွေကိုလည်း ဗဟိုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေ မပျော်သည်ဖြစ်စေ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ အောက်ပါ အဖျော်ယမကာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နေထိုင်မကောင်းချိန်မှာ သောက်သင့်တဲ့ အသီးဖျော်ရည်များ
သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို များစေနိုင်သည့် လူသိနည်းသော အချက်များ
သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကို များစေတဲ့ အချက်တွေကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ ဖျားနာတာ၊ ဆေးသောက်ချိန်မမှန်တာ၊ ကဖင်းဓာတ်စတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို, ကျန်းမာရေးစင်တာ နိုဝင်ဘာ 3, 2020 .2mins read
ကိုယ် အိပ်မပျော်ဖြစ်နေရင် ဒါမှမဟုတ် Insomnia ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သက်သာမှုပေးနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးလေးတွေ သိထားသင့်တယ် မဟုတ်လား။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အိပ်စက်ခြင်း အောက်တိုဘာ 31, 2020 .2mins read
ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးထဲမှာ အစားအစာနဲ့ ပံ့ပိုးတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
အိပ်ရေးဝဝအိပ်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ မကြာခဏပြောဖြစ်ကြပေမယ့် အလွန်အကျွံအိပ်ရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ သိပ်မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။
အိပ်စက်ခြင်း, အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ အောက်တိုဘာ 20, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 27, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 13, 2020 .3mins read